“Nyaradzai Vanhu Vangu” — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
ip-1 chits. 30 pp. 398-415
Mwari Ane Shoko Rinogara Nokusingaperi
Mwari Ane Simba Anotarisira Makwai Ake Nounyoro
Ane Simba Guru, Akachenjera Zvikuru
“Ndiani Wakasika Izvozvo?”
Bhuku reBhaibheri Nhamba 23—Isaya
“Farai Mufarisise Nokusingaperi Pamusoro Pezvandinosika”
Muprofita waMwari Anounzira Vanhu Chiedza
Ramba Wakamirira Jehovha
1. Ndeipi imwe nzira iyo Jehovha anotinyaradza nayo?
JEHOVHA ndi‘Mwari unopa nyaradzo.’ Imwe nzira yaanotinyaradza nayo ndeyezvipikirwa zvaakaita kuti zvinyorwe muShoko rake. (VaRoma 15:4, 5) Somuenzaniso, kana ukafirwa nomumwe munhu waunoda, chii chingava chinonyaradza kupfuura kutarisira kuti mudikanwi iyeye achamutswa munyika itsva yaMwari? (Johani 5:28, 29) Zvakadini nechipikirwa chaJehovha chokuti achagumisa uipi munguva pfupi iri kutevera oshandura pasi rino kuva paradhiso? Hazvinyaradzi here kutarisira kupukunyuka ndokupinda muParadhiso iyoyo iri kuuya usingazombofi?—Pisarema 37:9-11, 29; Zvakazarurwa 21:3-5.
2. Nei tichigona kuvimba nezvipikirwa zvaMwari?
2 Tinogona kuvimba nezvipikirwa zvaMwari chaizvoizvo here? Zvechokwadi, tinogona! Muiti wezvipikirwa izvozvo akavimbika kwazvo. Anokwanisa uye anoda kuita shoko rake. (Isaya 55:10, 11) Izvi zvakaenzanisirwa nenzira ine simba pashoko raJehovha nokumuprofita Isaya rokuti aizodzorera kunamata kwechokwadi muJerusarema. Ngatikurukurei uprofita ihwohwo, sezvahunooneka muchitsauko 40 chaIsaya, nokuti kudaro kunogona kusimbisa kutenda kwedu Jehovha, Muzadziki wezvipikirwa.
3, 4. (a) Isaya anonyora mashoko api enyaradzo ayo vanhu vaMwari vachada munguva iri mberi? (b) Nei vagari venyika yeJudha neJerusarema vachazoendeswa Bhabhironi senhapwa, uye uranda hwavo huchava kwenguva yakareba sei?
3 Muzana remakore rechisere B.C.E., muprofita Isaya anonyora mashoko anonyaradza ayo vanhu vaJehovha vachada munguva ichauya. Achangobva kutaurira Mambo Hezekia nezvokuparadzwa kweJerusarema kuri kuswedera uye kuendeswa kwevanhu vechiJudha kuBhabhironi, Isaya anobudisa mashoko aJehovha anopikira kudzorerwa achiti: “Nyaradzai, nyaradzai vanhu vangu, ndizvo zvinoreva Mwari wenyu. Taurai zvingavaraidza Jerusarema, danidzirai kwavari kuti kurwa kwavo kwapera, kuti zvakaipa zvavo zvakanganwirwa, kuti vapiwa noruoko rwaJehovha kurohwa kwakaringana pamusoro pezvivi zvavo.”—Isaya 40:1, 2.
4 “Nyaradzai,” shoko rokutanga rechitsauko 40 chaIsaya, rinonyatsorondedzera shoko rechiedza netariro riri mubhuku rose raIsaya. Nokuda kwokuramba kutenda, vagari venyika yeJudha neJerusarema vachaendeswa Bhabhironi senhapwa muna 607 B.C.E. Asi nhapwa idzodzo dzechiJudha hadzizoshandiri vaBhabhironi nokusingaperi. Aiwa, uranda hwavo huchangogara kusvika chikanganiso chavo cha“kanganwirwa.” Izvi zvichava kwenguva yakareba sei? Maererano nomuprofita Jeremia, makore 70. (Jeremia 25:11, 12) Zvadaro, Jehovha achatungamirira vakasara vakapfidza kubva Bhabhironi kudzokera Jerusarema. Mugore rechi70 rokusiyiwa kwenyika yeJudha iri dongo, ichava nyaradzo yakadini kuti nhapwa dzizive kuti nguva yokununurwa kwadzo kwakapikirwa yasvika!—Dhanieri 9:1, 2.
5, 6. (a) Nei rwendo rurefu rwokubva Bhabhironi kuenda Jerusarema rusiri kuzovhiringidza kuzadzika kwechipikirwa chaMwari? (b) Kudzorerwa kwevaJudha kunyika yokumusha kwavo kuchaita kuti mamwe marudzi anzwe sei?
5 Rwendo rwokubva Bhabhironi kusvika Jerusarema nderwemakiromita 800 kusvika ku1 600, zvichienderana nenzira yashandiswa. Rwendo rurefu urwu ruchavhiringidza kuzadzika kwechipikirwa chaMwari here? Kana! Isaya anonyora kuti: “Inzwi rounodanidzira, achiti: Gadzirai murenje nzira yaJehovha, ruramisirai Mwari wedu mugwagwa musango. Mipata yose ichazadzwa, makomo ose nezvikomo zvose zvichaderedzwa; pana makoronga pachaenzaniswa; pasakaenzana pachaitwa bani; kubwinya kwaJehovha kucharatidzwa, nyama yose ichazviona pamwe chete; nokuti muromo waJehovha wakataura izvozvo.”—Isaya 40:3-5.
6 Vasati vatanga rwendo, vatongi veMabvazuva vaiwanzotuma vanhu kuti vagadzire nzira nokubvisa matombo makuru kunyange kuvaka mazambuko nokuputsa zvikomo. Kana pari pakudzoka kwevaJudha, zvichaita sokuti Mwari pachake ndiye ari mberi, achibvisa zvipingiridzo zvose. Pamusoro pazvo, ava vanhu vezita raJehovha, uye kuzadzika chipikirwa chake chokuvadzorera kunyika yokumusha kwavo kuchaita kuti mbiri yake ionekwe pamberi pemarudzi ose. Achida asingadi, marudzi iwayo achamanikidzwa kuona kuti Jehovha Muzadziki wezvipikirwa zvake.
7, 8. (a) Mashoko aIsaya 40:3 akazadzika sei muzana rokutanga remakore C.E.? (b) Uprofita hwaIsaya hwakazadzika zvikuru sei muna 1919?
7 Kudzorerwa muzana remakore rechitanhatu B.C.E. handiko kwoga kwakanga kuri kuzadzika kwouprofita uhwu. Kwakavawo nokuzadzika muzana remakore rokutanga C.E. Johani Mubhabhatidzi ndiye akanga ari inzwi romunhu “unodanidzira murenje,” mukuzadzika kwaIsaya 40:3. (Ruka 3:1-6) Afuridzirwa, Johani akashandisa mashoko aIsaya paari iye. (Johani 1:19-23) Kutanga muna 29 C.E., Johani akatanga kugadzirira Jesu Kristu nzira.* Kufanozivisa kwaJohani kwakamutsa vanhu kuti vatarisire Mesiya akapikirwa kuitira kuti ivowo, vagomuteerera nokumutevera. (Ruka 1:13-17, 76) Nokuna Jesu, Jehovha aizotungamirira vanhu vanopfidza murusununguko urwo Umambo hwaMwari bedzi hunogona kupa—kusunungurwa muusungwa hwechivi norufu. (Johani 1:29; 8:32) Mashoko aIsaya akazadzika zvikuru pakununurwa kwavakasara vaIsraeri womudzimu paBhabhironi Guru muna 1919 nomukudzorerwa kwavo kukunamata kwechokwadi.
8 Zvisinei, zvakadini neavo vakamirira kubetserwa nokuzadzika kwokutanga kwechipikirwa chacho—nhapwa dzechiJudha dziri muBhabhironi? Vanogona here kunyatsovimba nechipikirwa chaJehovha chokuvadzorera kunyika yokumusha kwavo kunodiwa? Zvechokwadi, vanogona! Nemashoko akajeka nemienzaniso yakatorwa muupenyu hwezuva nezuva, Isaya zvino anopa zvikonzero zvinotendisa zvokuti nei vangava nechivimbo chakakwana chokuti Jehovha achaita kuti shoko rake rive rechokwadi.
9, 10. Isaya anosiyanisa sei kusagara kwoupenyu hwomunhu nokugara kwe“shoko” raMwari?
9 Chokutanga, shoko raIye anopikira kudzorerwa rinogara nokusingaperi. Isaya anonyora kuti: “Inzwi rounoti: Danidzirai! Mumwe akati: Ndichadanidzireiko? Nyama yose uswa, kunaka kwazvo kwose kwakaita seruva rokusango. Uswa hunooma, ruva rinosvava, nokuti mweya waJehovha unofuridza pamusoro pazvo; zvirokwazvo vanhu uswa. Uswa hunooma, ruva rinosvava; asi shoko raMwari wedu richagara nokusingaperi.”—Isaya 40:6-8.
10 VaIsraeri vanonyatsoziva kuti uswa hahugari nokusingaperi. Munguva yemwaka wakaoma, kupisa kwakanyanya kwezuva kunohuchinja kubva pakusvibira huchiva hwakatsvukuruka nokutsva. Mune zvimwe zvinhu, upenyu hwomunhu hwakaita souswa—haumbogari zvahwo. (Pisarema 103:15, 16; Jakobho 1:10, 11) Isaya anosiyanisa kusagara kwoupenyu hwomunhu nokugara kwe“shoko” raMwari, kana kuti chinangwa chakataurwa. Hungu, “shoko raMwari wedu” rinogara nokusingaperi. Mwari paanotaura, hapana chinogona kuchinja mashoko ake kana kuti kuatadzisa kuzadzika.—Joshua 23:14.
11. Nei tichigona kuvimba naJehovha kuti achazadzika zvipikirwa zviri muShoko rake rakanyorwa?
11 Nhasi tine shoko rechinangwa chaJehovha rakanyorwa muBhaibheri. Bhaibheri rakatarisana nokushorwa kwakasimba kwemazana emakore apfuura, uye vashanduri vasingatyi nevamwe vakaisa upenyu hwavo mungozi kuti varichengetedze. Asi, kuedza kwavo kwoga handiko kwakaita kuti ripukunyuke. Mbiri yose nokuda kwokupukunyuka kwaro inofanira kuenda kuna Jehovha, “Mwari mupenyu neanogara nokusingaperi” uye Muchengetedzi weShoko rake. (1 Petro 1:23-25) Chimbofunga nezveizvi: Sezvo Jehovha akachengetedza Shoko rake rakanyorwa, hatigoni kuvimba naye here kuti achazadzika zvipikirwa zvarinazvo?
12, 13. (a) Nei chipikirwa chokudzorerwa chichigona kuvimbwa nacho? (b) Mashoko api akanaka aripo nokuda kwenhapwa dzechiJudha, uye nei dzichigona kuva nechivimbo?
12 Isaya anopa chikonzero chechipiri nei chipikirwa chokudzorerwa chichigona kuvimbwa nacho. Anoita chipikirwa chacho ndiMwari ane simba anotarisira vanhu vake nounyoro. Isaya anoenderera mberi achiti: “Nhai, iwe, unoparidzira Zioni mashoko akanaka, kwira pagomo refu; nhai, iwe, unoparidzira Jerusarema mashoko akanaka, danidzira nesimba, danidzira, usatya; uti kumaguta aJudha: Tarirai, Mwari wenyu! Tarirai, Ishe Jehovha uchauya somunhu une simba, [“kunyange nesimba,” mashoko omuzasi, NW], ruoko rwake ruchamubatira ushe; tarirai, mubayiro wake unawo, zvaanoripira zviri pamberi pake. Uchafudza boka rake somufudzi, uchaunganidza makwayana ake mumaoko ake, nokuatakura pachipfuva chake, uchanatsa kutungamirira nhunzvi dzinomwisa.”—Isaya 40:9-11.
13 Munguva inotaurwa muBhaibheri yakanga iri tsika kuti vakadzi vapemberere kukunda, vachidanidzira kana kuti kuimba mashoko akanaka ehondo dzakakundwa kana kuti kununurwa kuri kuuya. (1 Samueri 18:6, 7; Pisarema 68:11) Isaya anoratidza nenzira youprofita kuti kune mashoko akanaka nokuda kwenhapwa dzechiJudha, mashoko anogona kudanidzirwa pasina kutya, kunyange pamusoro pemakomo—Jehovha achatungamirira vanhu vake kudzokera kuJerusarema ravo rinodiwa! Vanogona kuva nechivimbo, nokuti Jehovha achauya “kunyange nesimba.” Naizvozvo, hapana chingamudzivisa kuzadzika chipikirwa chake.
15. (a) Jehovha akauya rini “kunyange nesimba,” uye ‘ruoko ruri kumutongera’ ndiani? (b) Mashoko akanaka api anofanira kuziviswa nokusatya?
15 Mashoko aIsaya ane zvizhinji zvaanoreva nenzira youprofita nokuda kwezuva redu. Muna 1914, Jehovha akauya “kunyange nesimba” ndokugadza Umambo hwake mumatenga. ‘Ruoko rwuri kumutongera’ Mwanakomana wake, Jesu Kristu, uyo Jehovha akagadza pachigaro chake choUmambo kudenga. Muna 1919, Jehovha akanunura vashumiri vake vakazodzwa pasi pano muusungwa hweBhabhironi Guru ndokutanga kudzorera zvakakwana kunamata kwakachena kwaMwari mupenyu wechokwadi. Aya mashoko akanaka anofanira kuziviswa pasina kutya, sokunge nokudanidzira pamusoro pemakomo, kuitira kuti kuzivisa kwacho kusvike kure kwakafara. Saka, ngatikwidze manzwi edu noushingi toita kuti vamwe vazive kuti Jehovha Mwari akadzorera kunamatwa kwake kwakachena pasi pano!
17, 18. (a) Nei nhapwa dzechiJudha dzichigona kuvimba nechipikirwa chokudzorerwa? (b) Mibvunzoi inoshamisa inobvunzwa naIsaya?
17 Nhapwa dzechiJudha dzinogona kuvimba nechipikirwa chokudzorerwa nemhaka yokuti Mwari ane simba guru uye akachenjera zvikuru. Isaya anoti: “Ndianiko wakayera mvura zhinji muchanza choruoko rwake, nokuyera denga napanosvika minwe, nokuenzanisa guruva rapasi nechiyero, nokuyera kurema kwamakomo nechiidzo, nezvikomo nechiyero? Ndianiko wakayera Mweya waJehovha, kana wakamudzidzisa achimurayira namano? Wakarangana naani, ndiani wakamurayira nokumudzidzisa nzira yokururamisira, nokumudzidzisa zivo, nokumuratidza nzira yenjere here?”—Isaya 40:12-14.
18 Iyi mibvunzo inoshamisa yokuti nhapwa dzechiJudha dzifunge. Vanhuwo zvavo vangamisa mafungu emakungwa ane simba here? Chokwadi kwete! Asi, kuna Jehovha, makungwa akavhara pasi akaita sedonwe remvura muchanza choruoko rwake.* Ko munhuwo zvake angayera urefu hwamatenga ose makuru, azere nyeredzi kana kuti kuyera uremu hwemakomo epasi pano nezvikomo here? Aiwa. Asi Jehovha anoyera matenga nyore nyore sokuyera kungaita munhu chinhu nepakagumira minwe—musiyano uri pakati pepakagumira chigunwe chikuru nepakagumira kasiyanwa kana wakapfumbanura ruoko. Mwari anogona, chaizvoizvo kuyera uremu hwemakomo nezvikomo pachikero. Pane chero munhu akangwara kupfuura vose angarayira Mwari zvokuita mumamiriro ezvinhu aripo zvino kana kumuudza zvokuita munguva yemberi here? Chokwadi hapana!
19, 20. Kuti asimbise ukuru hwaJehovha, Isaya anoshandisa mienzaniso yechii yakajeka?
19 Zvakadini nenyika dzine simba dzepano pasi—dzingadzivisa Mwari here sezvaanozadzika shoko rake rechipikirwa? Isaya anopindura nokurondedzera marudzi sezvinotevera: “Tarirai, marudzi avanhu akaita sedonhwe remvura muchirongo, anenge guruva shomanene pachiyero; tarirai, unosimudza zviwi sechinhu chiduku-duku. Rebhanoni harina huni dzingaringana kuvesera, kunyange mhuka dzaro hadziringani kuitwa zvipiriso zvingapiswa. Marudzi ose akaita pamberi pake sepasina chinhu; pakufunga kwake akaita seasipo, chinhu chisina maturo.”—Isaya 40:15-17.
20 Kuna Jehovha, marudzi ose akaita sedonwe remvura riri kudonha muchirongo. Havana kumbopfuura guruva rakatsetseka rinoungana pachikero, pasina zvarinoita.* Fungidzira kuti kudai mumwe munhu aizovaka atari hombe oshandisa miti yose yaifukidza makomo eRebhanoni sehuni nokuda kweatari yacho. Zvino chifungidzira kudai aizopira mhuka dzose dzaimberereka mumakomo iwayo sezvibayiro. Kunyange chibayiro chakadaro chaisazova chakakodzera Jehovha. Kuita sokuti mufananidzo washandiswa kusvika zvino hauna kukwana, Isaya anototaura rimwe shoko gukutu—marudzi ose “maduku pane pasina chinhu” mumeso aJehovha.—Isaya 40:17, New Revised Standard Version.
21, 22. (a) Isaya anosimbisa sei kuti Jehovha haana waanoenzana naye? (b) Kurondedzera kwaIsaya kwakajeka kunoita kuti tigumise kuti chii? (c) Muprofita Isaya anonyora mashoko api akarurama mune zvesayenzi? (Ona bhokisi riri papeji 412.)
21 Kuwedzera kusimbisa kuti Jehovha haangamboenzaniswi, Isaya anoenderera mberi achiratidza upenzi hweavo vanogadzira zvidhori zvendarama, sirivha, kana kuti miti. Upenzi hwakadini kufunga kuti zvidhori zvakadaro zvaizova mucherechedzo wakakodzera wa“Iye ugere kumusoro kwenyika yakaurungana” uye anotonga vagari vayo!—Rava Isaya 40:18-24.
22 Rondedzero dzose dzakajeka idzi dzinotitungamirira kukugumisa chinhu chimwe—hapana chinhu chinogona kudzivisa Jehovha ane simba guru, akachenjera zvikuru, uye asina anoenzana naye pakuzadzika chipikirwa chake. Mashoko aIsaya anofanira kuve akanyaradza nokusimbisa nhapwa dzechiJudha sei dzaiva muBhabhironi dzaishuva kudzokera kunyika yokumusha kwadzo! Nhasi, nesuwo tinogona kuvimba kuti zvipikirwa zvaJehovha zvenguva yedu yemberi zvichaitika.
23. Nhapwa dzechiJudha dzingashinga nokuda kwechikonzero chei, uye zvino Jehovha anosimbisa chii nezvake?
23 Pane chimwezve chikonzero nei nhapwa dzechiJudha dzingashinga. Munhu anovimbisa kununurwa ndiye Musiki wezvinhu zvose uye Kunobva simba guru rose. Kusimbisa zvaanokwanisa kuita zvinoshamisa, Jehovha anoyeuchidza nezvesimba rake rinoratidzwa mune zvaakasika: “Ko zvino mungandifananidza naani, kuti ndienzane naye? Ndizvo zvinotaura Mutsvene. Tarirai kumusoro nameso enyu, muone kuti ndiani wakasika izvozvi, unobudisa hondo yazvo yakawanda; iye unozvidana zvose namazita azvo; nokuda kwoukuru hwesimba rake, uye zvaari mukuru pakusimba kwake, hakuna chimwe chinoshayikwa.”—Isaya 40:25, 26.
24. Achizvitaurira, Jehovha anoratidza sei kuti haana akaenzana naye?
24 Mutsvene waIsraeri ari kuzvitaurira. Kuratidza kuti hapana akaenzana naye, Jehovha anotaura nezvenyeredzi dzokudenga. Kufanana nomukuru weuto anogona kuronga uto rake noukuru hwaro, Jehovha anodzora nyeredzi. Kudai aizodzidana nemazita ‘hapana yaizoshayikwa.’ Kunyange zvazvo nhamba yenyeredzi iri huru, anodana imwe neimwe nezita, ringave zita reimwe neimwe kana kuti madaniro akaita sezita. Kufanana nemauto anoteerera, imwe neimwe inogara munzvimbo yayo uye dzakarongeka, nokuti Mutungamiriri wadzo azere no“ukuru hwesimba” uye “mukuru pakusimba kwake.” Naizvozvo, nhapwa dzechiJudha dzine chikonzero chokuva nechivimbo. Musiki anorayira nyeredzi, ane simba rokutsigira vashumiri vake.
25. Tingaitei nezvatinokumbirwa naMwari zvakanyorwa pana Isaya 40:26, uye zvotiita kuti tiitei?
25 Ndiani wedu angaramba zvinokumbirwa naMwari zvakanyorwa pana Isaya 40:26 achiti: “Tarirai kumusoro nameso enyu, muone”? Zvakawanikwa nevaongorori venyeredzi vomuzuva ranhasi zvakaratidza kuti matenga azere nyeredzi anotoshamisa kupfuura zvaairatidzika kuva muzuva raIsaya. Vaongorori venyeredzi vanotarisa mumatenga nemateresikopu avo ane simba vanofungidzira kuti muzvakasikwa zvose zvinooneka mune makwara enyeredzi angasvika mabhiriyoni 125. Chokwadi, rimwe chete rawo bedzi—Gwara Renzou—rine, maererano nokumwe kufungidzira, nyeredzi dzinopfuura mabhiriyoni 100! Kuziva zvakadaro kunofanira kumutsa mwoyo yedu kuti tiremekedze Musiki wedu uye kuvimba neshoko rake nechipikirwa zvakakwana.
26, 27. Manzwire enhapwa dziri muBhabhironi anorondedzerwa sei, zvinhu zvipi zvadzinofanira kuziva?
26 Achiziva kuti makore okuva nhapwa achaodza mwoyo nhapwa dzechiJudha idzi, Jehovha anofuridzira Isaya kufanonyora mashoko aya okukurudzira: “Unoreveiko, iwe Jakobho, unotaurireiko iwe Israeri, uchiti: Nzira yangu haizikanwi naJehovha, Mwari wangu unondidarika asingandiruramisiri? Hauna kuziva here? Hauna kunzwa here? [“NdiMwari kusvikira kunguva isingazivikanwi,” NW] Jehovha, Musiki wamativi ose enyika, haaziyi, haaneti; njere dzake hadzingazikanwi.”—Isaya 40:27, 28.*
27 Isaya anonyora mashoko aJehovha achirondedzera manzwire enhapwa dziri muBhabhironi, mazana emakiromita kure nenyika yokumusha kwadzo. Vamwe vanofunga kuti “nzira” yavo—nzira yakaoma youpenyu hwavo—haionekwi kana kuti kuzivikanwa naMwari wavo. Vanofunga kuti Jehovha haana basa nokusaruramisira kwavanotambura. Vanoyeuchidzwa zvinhu zvavanofanira kuziva, kana vasina kuzvionera vega, izvi vangazviziva mumashoko avakapiwa. Jehovha anokwanisa uye anoda kununura vanhu vake. Ndiye Mwari nokusingaperi uye Musiki wepasi pose. Saka, achine simba raakaratidza pakusika, uye kunyange Bhabhironi rine simba harisi paasingasvikiri. Mwari akadaro haanganeti orega vanhu vake. Havafaniri kutarisira kukwanisa kunzwisisa zvizere zviito zvaJehovha, nokuti kunzwisisa kwake—kana kuti uchenjeri, mano, nenjere—havangazvinzwisisi.
28, 29. (a) Jehovha anoyeuchidza sei vanhu vake kuti achabetsera vakaneta? (b) Muenzaniso upi unoshandiswa kuratidza nzira iyo Jehovha anopa nayo simba vashumiri vake?
28 Nokuna Isaya, Jehovha anoenderera mberi nokukurudzira nhapwa dzakaora mwoyo achiti: “Vanoziya unovapa simba; unoshayiwa simba unomuwedzera simba rake. Kunyange navakomana vachaziya nokuneta, namajaya achawira pasi chose; asi vanomirira Jehovha vachawana simba idzva; vachabhururuka namapapiro samakondo, vachamhanya vasinganeti, vachafamba vasingaziyi.”—Isaya 40:29-31.
29 Paanotaura nezvokudikanwa kwokupa vakaneta simba, Jehovha angave achifunga nezverwendo rwakaoma urwo nhapwa dzichafanira kuita kuti dzidzokere kumusha. Jehovha anoyeuchidza vanhu vake kuti maitire ake kubetsera vakaneta vanotarisira kwaari kuti avatsigire. Kunyange vanhu vakasimba pavose—“vakomana” ne“majaya”—vanganeta nokupera simba uye kuwa nokuneta. Asi Jehovha anopikira kupa simba—simba idzva rokumhanya nokufamba—kune avo vanovimba naye. Kubhururuka kunoratidza sokusiri kwokutamburira kwegondo, shiri ine simba inogona kubhururuka kwemaawa panguva, zvinoshandiswa kuenzanisira nzira iyo Jehovha anopa nayo vashumiri vake simba.* Nokutarisira kutsigirwa naMwari kwakadaro, nhapwa dzechiJudha hadzina chikonzero chokupera mwoyo.
30. VaKristu vechokwadi nhasi vangawana sei nyaradzo mundima dzokupedzisira dzechitsauko 40 chaIsaya?
30 Ndima dzokugumisa idzi dzechitsauko 40 chaIsaya dzine mashoko anonyaradza nokuda kwevaKristu vechokwadi vari kurarama mumazuva okupedzisira egadziriro ino yakaipa. Nezvinodzvinyirira zvakawanda kudai nezvinonetsa zvinotiodza mwoyo, zvinokurudzira kuziva kuti matambudziko atinotsungirira nokusaruramisira kwatinotambura nakwo hakusi kuti Mwari wedu haazvioni. Tinogona kuva nechokwadi chokuti Musiki wezvinhu zvose, Uyo ane “njere dzisingaperi,” acharuramisa kusaruramisira kwose munguva nenzira yake. (Pisarema 147:5, 6) Panguva ino, tinofanira kutsungirira nesimba redu. Jehovha uyo ane kunobva simba rake kusingaperi, anogona kupa simba—kunyange “rinopfuura romuzvarirwo”—kuvashumiri vake munguva yemiedzo.—2 VaKorinde 4:7.
31. Chipikirwa chipi chechiedza icho uprofita hwaIsaya hwaiva nacho nokuda kwenhapwa dzechiJudha muBhabhironi, uye tinogona kuvimba zvakakwana nechii?
31 Funga nezvenhapwa idzodzo dzechiJudha dziri muBhabhironi muzana remakore rechitanhatu B.C.E. Mazana amakiromita kubva ipapo, Jerusarema radzo rinodiwa harina unogaramo, temberi yaro yava matongo. Kwadziri, uprofita hwaIsaya hwaiva nechipikirwa chinonyaradza chechiedza netariro—Jehovha aizodzidzorera kunyika yokumusha kwadzo! Muna 537 B.C.E., Jehovha akatungamirira vanhu vake kudzokera kumusha, achiratidza kuti Muzadziki wezvipikirwa zvake. Nesuwo tinogona kuva nechivimbo chakazara muna Jehovha. Zvipikirwa zvake zvoUmambo, izvo zvinotaurwa zvinonakidza muuprofita hwaIsaya, zvichaitika. Iwayo zvechokwadi mashoko akanaka—shoko rechiedza chavanhu vose!
Isaya anofanotaura nezvokugadzira nzira pamberi paJehovha. (Isaya 40:3) Zvisinei, mabhuku eEvhangeri anoshandisa uprofita ihwohwo kune izvo Johani Mubhapatidzi akaita mukugadzirira Jesu Kristu nzira. Vanyori vakafuridzirwa veMagwaro echiKristu echiGiriki vakadaro nemhaka yokuti Jesu aimirira Baba vake uye akauya muzita raBaba vake.—Johani 5:43; 8:29.
Zvinofungidzirwa kuti “uremu hwemakungwa hunenge 135 ane mazero 16 (1,35 x 1018) kana kuti inenge 1/4400 yeuremu hwose hwePasi.”—Encarta 97 Encyclopedia.
The Expositor’s Bible Commentary inoti: “Kutengeserana kwepamusika kwePedyo neMabvazuva kwaisakoshesa donhwe duku remvura muchirongo chokuyeresa kana kuti guruva shomanene raiva pachikero apo nyama kana kuti michero yaiyerwa.”
Pana Isaya 40:28, shoko rokuti “nguva isingazivikanwi” rinoreva kuti “nokusingaperi,” nokuti Jehovha ndi“Mambo asingagumi.”—1 Timoti 1:17.
Gondo rinoramba riri mumhepo rakamisa mapapiro risingamboshandisi simba rakawanda. Rinoita kudaro nokushandisa mhepo nounyanzvi, kana kuti mhepo inodziya inosimuka.
[Bhokisi/Mufananidzo uri papeji 404, 405]
Jehovha, Mufudzi Ane Rudo
Isaya anofananidza Jehovha nomufudzi ane rudo anotakura makwayana ake pachipfuva chake. (Isaya 40:10, 11) Isaya sezviri pachena anotorera muenzaniso uyu unofadza pamiitiro yevafudzi yomuupenyu chaihwo. Munhu womuzuva ranhasi akatarira vafudzi pamateru eGomo reHermoni muMiddle East anoti: “Mufudzi mumwe nomumwe ainyatsotarira boka rake kuti aone kuti raifamba sei. Paaiwana gwayana richangobva kuberekwa airiisa . . . munguo yake huru yokumusoro yakapetwa, sezvo rainge risati rasimba kuti ritevere mai vacho. Aiti kana pachipfuva chake pazara, aiisa makwayana pamapfudzi ake, achiabata nemakumbo, kana kuti kuaisa mubhegi, kana kuti bhasikiti pambongoro, kusvikira madiki okwanisa kutevera vanamai vacho.” Hazvinyaradzi here kuziva kuti tinoshumira Mwari ane hanya netsitsi dzakadaro nokuda kwevanhu vake?
[Bhokisi/Mufananidzo uri papeji 412]
Pasi Rakaumbwa Sei?
Munguva dzekare vanhu vaifunga kuti pasi rakati sandarara. Zvisinei, kare muzana remakore rechitanhatu B.C.E., muzivi wechiGiriki Pythagoras akati, pasi rinofanira kuva rakaita sebhora. Kunyange zvakadaro, mazana maviri emakore Pythagoras asati adaro, muprofita Isaya akataura zvakajeka zvinoshamisa uye nechivimbo kuti: “Ndiye ugere kumusoro kwenyika yakaurungana.” (Isaya 40:22) Shoko rechiHebheru rokuti chugh rakashandurwa pano kuti “urungana” rinogona kushandurwa kuti “bhora.” Sezvineiwo, chinhu chakaita sebhora bedzi ndicho chinooneka chakaita denderedzwa chero pawatarira uri.* Saka achitaura zvinhu zvakanga zviri kure kwazvo nenguva yake, muprofita Isaya akanyora shoko rakarurama pasayenzi risina ngano dzekare.
Mutaura nomazvo, pasi harina kunyatsourungana zasi nokumusoro. Rakada kunoti sandarara kumusoro nezasi.
[Mufananidzo uri papeji 403]
Johani Mubhabhatidzi ndiye akanga ari “inzwi rounodana murenje”